Ogaden News Agency (ONA) – Kuuriyada Waqooyi oo Gantaalo ay tuureen Hawada ku Qarxay.
Kuuriyada Waqooyi oo Gantaalo ay tuureen Hawada ku Qarxay.
Posted by Wariye Qaran	/ April 30, 2017
Dowlada Kuuriyada Waqooyi ayaa markale tijaabisay mid kamid ah Gantaaladeeda ridada dheer balse waxaa lagu soo warmayaa in gantaalkaasi uu hawada ku qarxay daqiiqado kadib iyadoo la rumeysan yahay in tijaabadaasi lagu fashilmay.
Arrintan ayaa imaaneysa xili Maraykanka ku goodinayo inuu talaabo militari ka qaadi doono Kuuriyada Waqooyi hadii ay sii wado tijaabinta hubkeeda Gantaalada iyo Nukliyeerka. Tijaabadan cusub ayaa u muuqata mid loogu jawaabayey Maraykanka.